Mandalas handoko maimaim-poana ary vonona ny hisintona | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 05/07/2021 19:53 | Nohavaozina amin'ny 05/07/2021 19:56 | Inspiration
Mandala no lamaody. Tsy vitan'ny hoe mahita sary mampihetsi-po antsika izy ireo, fa ampiasaina ho fitaovana hanampiana hisaintsainana, hialana voly ary handany fotoana amin'ny tenantsika ihany koa. Noho izany, tsy mahagaga raha mitady mandala lokony ianao mba hahazoanao tombony amin'izany.
fa, Inona ireo mandala? Aiza no ahitanao mandala fandokoana loko? Ahoana no hampandehanao azy ireo miasa? Raha manontany tena ianao dia omenay anao ny lakilen'ny zava-drehetra.
1 Inona ireo mandala
2 Maninona no mampiasa mandalas amin'ny fandokoana
3 Mandalas handoko: aiza no ahazoana azy ireo
3.1 Color fotsiny
3.2 Fandokoana an-trano
3.3 Salama ry ankizy
3.4 Alatsinainy mandala
3.5 Mandalas maimaim-poana 100%
3.6 Mandala 4 maimaim-poana
4 Ny lakilen'ny fiasana amin'ny mandala amin'ny fandokoana
Inona ireo mandala
Hanomboka amin'ny fanampiana anao izahay hahita izay atao hoe mandala. Ity, fantatra amin'ny anarana hoe Dultson Kyilkhor Amin'ny Tibetana, izy ireo dia endrika ampiasain'ny Buddhists, Jains, ary Hindus amin'ny fanoloran'izy ireo. Ho azy ireo, ny mandala dia fampisehoana ny vatana sy ny sain'ny Buddha, manome azy ireo hery lehibe amin'ny fombafomban'izy ireo. Toy ny hoe natolotra an'ireo andriamanitra tamin'io sary io izao rehetra izao.
Zavatra iray izay vitsy no mahalala izany mandala dia mandrafitra ny faritra samy hafa. Ohatra, ny foibe dia hisolo tena ny Tendrombohitra Meru foana. Tendrombohitra masina ity, manana kilometatra mihoatra ny 1081479. Ary alohan'ny hitadiavanao azy amin'ny sarintany hitsidihana azy dia holazainay aminao fa mbola tsy hita ny tena toerana. Ny tendrombohitra Meru dia voalaza fa manana lafiny efatra, samy manana ny lokony: lapis lazuli, robina, volamena ary kristaly. Noho izany, ny afovoan'ny mandala dia iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra.
Maninona no mampiasa mandalas amin'ny fandokoana
Heverinao ve fa ny mandala mandala dia ho an'ny ankizy ihany? Ny marina dia tsia. Ireo dia natokana ho an'ny olon-dehibe ary, mino na tsia, ny boky mandala amidy an'arivony maro.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana, psikology, dokotera, sns. misy fiatraikany tsara eo amin'ny mandala fandokoana. Ary ny fitaoman'izy ireo amin'ny adin-tsaina sy ny asan'ny ati-doha. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mampihena anao sy manampy ny sainao hilamina, hanjavona ny adin-tsaina ary hampifantoka ny sainao amin'ny zavatra ataonao ka tsy hahita ny zavatra hafa rehetra. Mampitony anao, esory ny fahasosorana, afaho ny tenanao, esory ny fahaizanao mamorona, ary aza misaintsaina ny sasany amin'ireo tombony azon'ireo sary ireo.
Mila manana mandala sy loko fotsiny ianao vao hahatratra azy. Ary afaka manampy anao amin'izany koa izahay.
Mandalas handoko: aiza no ahazoana azy ireo
Ny valin'io fanontaniana io dia mety any amin'ny fivarotam-boky, satria misy boky maro izay navoaka niaraka tamin'ny fanangonana mandala. Fa azonao atao ihany koa ny mahazo azy ireo maimaim-poana amin'ny Internet. Misy pejy web maro izay manolora mandalas fandokoana, ny ankamaroan'izy ireo ao amin'ny PDF, ary vonona ho anao hanonta maimaim-poana.
Avelanay eto ireo tranonkala maro izay ahitanao mandala handokoana.
Izy io dia tranonkala iray ahazoanao mandala sy sary an'arivony amin'ny ankapobeny. Aza matahotra anefa, raha mitady lohahevitra manokana ianao, dia ataon'izy ireo ho mora aminao izany satria voasokajy toy izany izy ireo.
Raha vao mahita ilay tadiavinao ianao dia mila mampidina azy fotsiny. Homeny anao amin'ny PDF izy ireo hahafahanao manonta azy tsy misy olana.
Ity tranonkala ity dia manolotra sary marobe, nefa koa misy mandala na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Mazava ho azy, tsy manana betsaka toy ny amin'ny vavahadin-tranonkala hafa izy io, fa ireo ananany dia afaka manintona ny sainao betsaka.
Salama ry ankizy
Aza manaiky ho voafitaky ny anarana na ny volavolan'ny tranokala. Ao no ahitanao ny fizarana manokana ho an'ny mandala ary izy ireo dia voalamina amin'ny lohahevitra sy haavon'ny fahasahiranana.
Ity safidy ity Manoro hevitra azy izahay raha efa manana traikefa amin'ny mandalas fandokoana. Ary mety ho zavatra sarotra vitaina rehefa mahita be dia be handoko, ary na dia sarotra aza.
Fa raha te hanandrana ianao dia hahita endrika mahavariana izay, raha ataonao izany dia ho afa-po ianao amin'ny valiny.
Mandalas maimaim-poana 100%
Tsy mila karazana fampisehoana izany satria fantatrao tsara izay ho hitanao. Ny famolavolana mandala rehetra dia azo atao pirinty ary maro amin'izy ireo dia entanin'ny kolontsaina malaza. Mazava ho azy, raha tena tadiavinao ny votoatin'ny mandala amin'ny fandokoana dia mamporisika anao izahay hifantoka amin'ireo nentin-drazana, ary avelao ny hafa hiala amin'ny sinema, fahitalavitra, sns.
Mandala 4 maimaim-poana
Amin'ity tranga ity dia manana tranokala midadasika ianao izay ahitanao endrika maro mandala handokoana sy hanaovana pirinty. Ary maimaim-poana daholo! Azonao ilay izy sokajiana amin'ny sokajy sy lohahevitra ary azonao atao koa ny mamorona ny volavolanao.
Ny lakilen'ny fiasana amin'ny mandala amin'ny fandokoana
Alohan'ny hanombohanao mitsidika ireo tranonkala natolotray tamin'ny mandala fandokoana, dia tsy te hiala amin'ilay lohahevitra izahay raha tsy manome torolàlana kely anao hikajiana. Ary tsy olana ny misintona ny mandala, manoritra ny loko ary manomboka miloko. Raha te handray soa amin'ny fampiasana azy dia mila manaraka ny sasany ianao fitsipika tsotra:
Raha sambany ianao hanao an'io dia tsara kokoa ny misafidy mandala manana endrika lehibe.
Raha te hanala ny fihenjanana, ny adin-tsaina sns ianao. avy eo misafidy mandala misy endrika kely.
Mba hampitomboana ny toe-tsainao ny tsara indrindra dia ireo manana endrika boribory.
Raha miresaka fandokoana dia azonao atao amin'ny loko rano, pensilihazo, marika, savoka ...
Misy teknika roa hoso-doko: avy any ivelany (hanehoana ny fahatsapantsika amin'izao fotoana izao); na avy any ivelany ka hatrany anatiny (hitady ny ivonay).
Tsy maintsy ataonao mifantoka amin'ny sary ny sainao, raha tsy izany dia tsy mandeha izany. Noho izany, mifidiana toerana mangina sy milamina foana ahafahanao mandany fotoana kely tsy misy fanelingelenana.
Safidio ny loko tianao. Ao no misy ny hafetsena. Rehefa vita ianao dia tokony hisaintsaina ny antony nisafidiananao ny sary, ireo loko, izay mitambatra ... Tsy mila tonga lafatra ianao fa mamita azy fotsiny.
Raha mitadidy an'izany rehetra izany isika dia izao ny fotoana tokony hamakianao ireo tranonkala na olon-kafa fantatrao ireo ary ampidinoo ny iray amin'ireo mandala handoko. Manomboha amin'ny iray ary manandrama, raha mbola tsy nanao izany ianao, hahitanao izay fahatsapana atolotray anao. Raha tianao izany dia afaka manohy hatrany ianao. Ny tanjona dia ny hifandray aminao ary indrindra indrindra, manana fotoana milamina sy miala sasatra izay manampy anao hahatsapa ho tsara kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Mandalas handoko maimaim-poana ary vonona ny hisintona